HomeWararka Ciyaaraha MaantaLiiska: Arsenal oo dooneysa inay iska iibiso 5 ciyaaryahan xagaagan
May 15, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Iyadoo isha lagu hayo dib u habeynta kooxda lagu sameynayo, Arsenal ayaa isha ku heysa inay iska iibiso ciyaartoy dhowr ah. Wararka ayaa sheegaya in ilaa 5 xiddig oo waaweyn ay raadinayaan in ay ka tagaan kooxda xagaaga.
Warbixin ay soo saartay The Athletic ayaa soo jeedinaysa Bernd Leno, Granit Xhaka, David Luiz iyo Hector Bellerin ay qarka u saaran inay dalab ka gudbiyaan kooxda. Alexandre Lacazette ayaa sidoo kale qarka u saaran inuu ka tago madaama Arsenal aysan diyaar u aheyn inay heshiis cusub u soo bandhigto.
Mikel Arteta ayaa doonaya inuu Arsenal ku celiyo Champions League, waxaana uu ku wargeliyay guddiga inay u baahan yihiin inay kooxdooda dib u soo celiyaan xagaagan. Xiddiga reer Spain ayaa cadeeyay ciyaartoyda uu doonayo iyo kuwa uu doonayo inuu sidoo kale iibiyo.
Mikel Arteta ayaa rumeysan in kooxda ay u baahan tahay inay horumar sameyso isla markaana ay bedesho qaar ka mid ah ciyaartoyda haatan jirta iyagoo wajiyo cusub lasoo kordhinayo waa wadada kaliya ee ay taasi ku dhici karto. Wuxuu u sheegay warbaahinta horaantii todobaadkan :